Verse 1: Waa wax aan maanka ku samayn aad heshay daqiiqad? swag madbacad, Waxaan iska dul waxaan ku jiray silsilado iyo daal waxaa ka mid ah ayaan ahay (qaylada baabuurta) I know...
Intro: (Natalie) Waxaan arkaa in aad daawashada Ma jeceshahay waxa aad aragto? Anigu ma waxaan ahay farmuuqay? Well, sorta kinda laga yaabaa Muxuu aad maskaxda ku haysaa? Your face looks familiar I see you all...
Verse 1: Boy I hopped out the grave good morning I been sleeping for too long I’m yawning Everybody talking trying to see me, gaalnimo Like sida uu neefsanayo? He was six feet...
Intro / muunad: Sug, kor ha igu qaataan mid kale (Ku celi 4X) Verse: Boy aad ogtahay waxaan iyaga u helay J ee, iyaga rock cagahayga Caught kor craze ku saabsan, my closet ain’t...
Intro: Oh, Waan ku jeclahay, haa Like kale ma jiro, haa Marka aan arko aad iftiimisid aad iftiimiyo sida xagaaga, haa Verse 1: You know that feeling when them words fail It’s...